Takin it wayyyy kudzokera ku70s kune imwe nzvimbo inofadza inonakidza (yakagadzirwa) - NYE Countdown yeJs, Vjs, Nightclubs 2019
SKU: DJ DROP 100 - #19 Category: DJ Drops
Takin it wayyyy kudzokera kune 70s kune imwe disco fun fun (yakagadzirwa)
O Ndine urombo. Ndakanga ndisingazivi kuti ndaifanira kungotamba nziyo dzenyu manheru ano! (yakagadzirwa)
Kudzokera kumashure e80 neyiki yekare isina nguva! (yakagadzirwa)
Paunomuka mangwanani ... ndapota usapomera DJ kuti chii chaunoona mubhedha rako! (yakagadzirwa)
Kubata musikana, kubata kunwa uye kunyorera miromo yako ... Gore Idzva riri pedyo pano! (yakagadzirwa)